ကြယ်ကြွေချိန်: ယောကျာ်းဆန်သော မိန်းကလေးများ
တပါးသူ ဆုတောင်းပြည့်ဖို့ ကြယ်တစ်ပွင့် ခူးခြွေပေးဖို့ရာ မတတ်နိုင်ပေမယ့် သူ့အတွက် ကိုယ်တိုင် ကြွေဆင်းပေးရသော ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်ရပါစေလေ...
ယောက်ျားဆန်သော မိန်းကလေးများသည် အနည်းနှင့်အများ သဘာဝနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု လူအတော်များများက လက်ခံထားကြသည်။ လူတိုင်းလိုလိုက ထိုမိန်းကလေးများကို မိန်းမများ တပ်အပ်သော ပညာရပ်များ မတတ်အံ့ဟု ထင်ကြသည်။ ဘာကြောင့်များ အပေါ်ယံ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံကို ကြည့်ပြီး တစ်ဖတ်သတ် ကောက်ချက်ချရသလဲ မိတ်ဆွေ? ကျနော် နားမလည်ပါ။
ကျနော်သည် ယောကျာ်းဆန်သော ကျားကျားလျားလျား မိန်းကလေးများ ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုလျှင် မှားမည်မထင်။ အကြောင်းမူကား ကျနော်သည် အ.ထ.က ၂ လသာ (မိန်းကလေးများ) ကျောင်းထွက် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။ သူငယ်တန်းကစ ဆယ်တန်းအဆုံး ၁၁နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး "မ" ချည်းသာ ရှိသည့် ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကျက်စားခဲ့သည်။ "ကျား" ဆိုလို့ အနီးကပ်ဆုံး ဖေဖေရယ် မောင်လေးရယ်ပဲ သိသည်။ ဆယ်တန်းထိ ပေါင်းသင်းသော သူငယ်ချင်းများထဲတွင် ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်မှ မပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ကျနော်လည်း မသိ။ သူ့ဟာသူကို ဖြစ်သွားတာ။ မိန်းကလေး အဖော်ကိုသာ ခုံမင်သည်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့.. ကျနော့တစ်သက် ယောကျာ်းစစ်သော ယောကျာ်းများ အကြောင်း ကောင်းကောင်း နားလည်လိမ့်မည် မထင်တော့။ ဗေဒင် လက္ခဏာ ကြည့်တတ်သော ကျနော့် မမ တစ်ယောက်က ပြောသည်။ အပျိုကြီး ဖြစ်မည်တဲ့၊ ဒီတသက် ယောကျာ်းမရ နိုင်တဲ့။ ဒါလည်း ကောင်းတာပဲ.. အပူအပင် ကင်းတာပေါ့အေ။ :D
ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းကလေးများ အကြောင်း ဆက်ပါမည်။ မိန်းကလေးကျောင်းထွက်ဟု ပြောရန်မလို၊ ကျနော့ သူငယ်ချင်းများထဲမှ ၈၀% သည် ဆံပင် တိုတို ဖြတ်ပြီး ယောက်ျားလေးဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀တ်တတ်စားတတ်ကြသည်။ ခေတ်မှီလွန်၊ ခေတ်နောက်ကျလွန်းသည့် အုပ်စုထဲ တစ်ယောက်မှမပါ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ နှင့် တီရှပ်ကို ကြည့်ကောင်းအောင် ၀တ်ကြသည်။ ပုံမှန် ထသွားထလာ စကတ်ဝတ်တတ်သော သူငယ်ချင်း အတော်နည်းသည်။ ကျနော်ကတော့ ဘင်ခရာ အဖွဲ့ဝင်ပြီး ဆံပင်ရှည်ကို ဖြတ်လိုက်ရကတည်းက ဆံပင်နှင့် ပတ်သက်သော နှောင်ကြိုးများ တိခနဲ ပြတ်သွားခဲ့ပြီ။ ခုထိ ဆံပင်ရှည် ထား၍ မရတော့။ အထက်တန်းတွင် အတွဲဖြစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းထဲမှ မိန်းကလေး အတော်ဆန်သူ ၃၊၄ ယောက်သာ ရှိမည်။ အားလုံးကတော့ ချောချောလေးတွေချည်းပါပဲ။
လသာ ၂ တွင် မိန်းကလေးကျောင်း ပီပီ culture တစ်ခုရှိသည်။ အချစ်တော် ထားကြသည်။ ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောရရင်တော့ မိန်းကလေးချင်းချင်း သမီးရည်းစားပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှ မရှိလို့ မိန်းကလေးချင်း ချစ်ကြတာလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါ။ လသာ ၂ ၏ အိမ်နီးချင်းကျောင်းမှာ လသာ၁ (ယောကျာ်းလေးကျောင်း) ဖြစ်ပါသည်။ ဤ၂ကျောင်းလုံးသည် တစ်ချိန်ကျောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဆင်းချိန် တူသည်ပေါ့။ ကျောင်းဆင်းပြီဆိုလျှင် ထိုကျောင်းမှ ကျောင်းသားများသည် လသာ၂ မိန်းဂိတ်ဝရှေ့တွင် ကျနော်တို့၏ ကျောင်းသူ ချောချောလေးများကို လာကြောင်ကြသည်။ သူတို့ နှစ်သက်သော မိန်းကလေးများကို လာပိုးကြသည်ပေါ့။ မှတ်မိပါသေးသည်။ ကျနော်၏ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကို ကျောင်းကားပေါ်ထိ နာမည်လိုက်မေး၍ ကျောင်းကားဦးလေးကြီးမှ ထိုသကောင့်သားကို ၀င်ဟောက်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်။
ထို "ကျား" များ ဘယ်လောက်ပင် ကြိုးစား ကြိုးစား ၉၉% သော လသာ၂ ကျောင်းသူများမှာ စိတ်ယိမ်းယိုင်ခြင်း မရှိ (ကျနော့်ဘော်ဒါတွေ ပြောပါတယ်)။ ကျောင်းထဲမှာ၊ အတန်းထဲမှာသာ အချစ်တော် ထားချင်ထားကြမည်၊ ကျောင်းပြင်ပမှာတော့ နိုးနိုး.. ဆီးပြားသာ စားချင်စားမည်၊ ရည်းစားတော့ မထား ရေးချ မထားကြ။ ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်၏ အပတ်စဉ် မနက်ခင်း Assembly တိုင်း ဆုံးမ သြ၀ါဒကို နှလုံးသွင်း ကြရောထင့်။ အားလုံး "ကျား" ကင်းရှင်းကြသည်။ လသာ ၁ ဟူသည် လသာ ၂ ၏ အကြီးမားဆုံး ရန်သူ ဟု ဆို၍ရပါသည်။ ဆရာမကြီးကလည်း အင်မတန် မှန်တဲ့ Concept တွေ သွင်းထားတာကိုး၊ သူမ ပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်း ခုထိ မှတ်မိပါသေးသည်၊ "ဒီအရွယ် သမီးတို့ကို လာပိုးတယ်ဆိုတာ သူတို့လာအာချောင်သလို ချစ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ခိုင်းစားဖို့။ သူတို့အိမ်မှာ အိမ်ဖော်လိုလို့" တဲ့။ ရယ်လည်း ရယ်ရပါပေ့။ :D
ယခု ပြန်တွေးကြည့်ရင်း ရယ်ပြုံးစရာ အဖြစ်အပျက်လေး များစွာကို ပြန်ပြောင်းတမ်းတမိပါသည်။ ၈တန်းနှစ်ကပေါ့။ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ချောချောလေးကို အထက်တန်း မမ တစ်ယောက်က သူ့ကို ချစ်ပါသည်၊ အမကို ပြန်ချစ်ပါနော် ဆိုပြီး အတင်းအကြပ် စကားတွေလာပြော၍ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ငိုခဲ့ရသည်။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်း ငိုနေတာ မြင်ရတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်။ ဒေါကြီးမောကြီးနှင့် ကျနော်တို့ အုပ်စု ၉တန်း ၁၀တန်း ကျောင်းခန်းများ တစ်ခန်းဝင် တစ်ခန်းထွက် ပိုက်စိပ်တိုက်ကာ ထိုလက်သည် မမ ကို လိုက်ရှာခဲ့ဖူးသည်။
မေမေက အလယ်တန်း အထက်တန်းတွင် အမြဲဆုံးမသည်။ ကျောင်းမှာ စာပဲ အာရုံစိုက်နော်၊ တခြားကိစ္စတွေ လျှောက်မလုပ်ရဘူးနော်၊ သူများတွေက စာမတော်ချင်လို့ အဲ့ဒါတွေ လုပ်နေကြတာ တဲ့။ တကယ်တော့ မေမေလည်း စိန်မေရီ (ပန်းဘဲတန်း မိန်းကလေးကျောင်း) ထွက်ပါပဲ၊ သူတို့ခေတ်ကလည်း ဒီလို case တွေ ရှိတယ်တဲ့၊ သမီး ကြီးလာရင် ပြန်တွေးကြည့်ရင်း ရယ်ချင်လိမ့်မယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါသည်။ ထိုနှစ်များက အင်မတန် ချစ်ခဲ့ရသော (အချစ်တော်လိုလား ဘာလားတော့ မသိတော့ပါဘူး) အတန်းဖော်လေးသည် ယခုအခါ ကျနော့်အား အနွံတာခံသော အချစ်တကာ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်နေပါပြီ။ ယခုအချိန် ကျနော်နှင့် တူတူ ဒီမှာ ကျောင်းမတက်ပေမယ့် သူမသည် နောင်နှစ်ဆို အင်မတန် ကျက်သရေရှိသော ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက် ဖြစ်တော့မည်။ ကျနော် ရန်ကုန် အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်း ပထမဆုံး ပြေးကာ သွားတွေ့ရသည်မှာ သူမ သာ ဖြစ်သည်။ သူမကား ကျနော်၏ စိတ်အလိုကို နားလည်သော၊ ကျနော် ရင်ဖွင့် ညည်းတွားသမျှ သည်းခံ နားထောင်ပေးသော၊ (ဖေဖေကလွဲလျှင်) တစ်ဦးတည်းသော သူငယ်ချင်းကောင်းလေး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနှစ်များက စိတ်ကောက်ခဲ့ကြပုံ၊ စနောက်ခဲ့ကြပုံ၊ ဗရုတ်ကျခဲ့ကြပုံများကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း သူမကို အလွန် သတိရမိပါသည်။ 老婆。。想你哦。。:D
ကျနော်မှလွဲ၍ ကျနော့်သူငယ်ချင်းများအားလုံး ထမင်းဟင်း ကောင်းကောင်း ချက်ပြုတ်တတ်ကြသည်။ ကျနော့ ၀ါသနာက ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင် မရှိ၊ ပေါင်မုန့် ကိတ်မုန့် ဖုတ်ခြင်းတွင် သာ ရှိသည်။ ဘာပဲပြောပြော ယောက်ျားဆန်သော မိန်းကလေးများ အိမ်မှု ကိစ္စ မနိုင်နင်း၊ အချက်အပြုတ် မတတ် ဟူသော အဆိုကို ဆန့်ကျင်ရပါမည်။ ထိုမိန်းကလေးများသည် အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါ မှန်ပါက မိန်းကလေးဆန်သော မိန်းကလေးများထက် ပို၍ပင် နူးညံ့ ကြင်နာတတ်ကာ အိမ်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင်သည်ဟု ပြောချင်ပါသည် (ကျနော့် ကိုယ်တွေ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိန်းကလေးများကို လေ့လာရသလောက်ပေါ့)။
၂တန်းတုံးက အတန်းပိုင် နဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာမတွေနဲ့ တစ်တန်းလုံး စုရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။ အလယ်တည့်တည့်က ဆရာမက အတန်းပိုင် တီချယ် ဒေါ်ခင်မိမိကြီးပါ။ ဆရာမက အိမ်စာ မပြီးရင် အရမ်းဆူ အရမ်းရိုက်တယ်ဗျ။ :D ဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးကတော့ ကျနော့်ကို အချစ်ဆုံး၊ သူငယ်တန်းထဲက စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ တီချယ် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝေ ပေါ့။
လသာ၂ ဘင်ခရာ ပြိုင်ပွဲတုန်းက စစ်ရေးပြ သရုပ်ဖော်ကွက်ပါ။ ဒါက ရှေ့နှစ်ကပုံ။ ကျနော်တို့ နှစ်က ပုံကတော့ ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး :(
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ လသာ ၂ ကို ကျနော် အလွန် ချစ်ပါသည်။ အပြစ်ကင်းသော၊ ချစ်စရာကောင်းသော သူငယ်ချင်းများနှင့် တွေ့ခဲ့သည်။ သူငယ်တန်းထဲက ယခု တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ထိ တောက်လျှောက် ကျောင်းတူ၊ အတန်းတူခဲ့သော ငယ်ပေါင်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နှင့် ယခုချိန်ထိ တွဲမြဲ။ မိန်းကလေး ဘင်ခရာ အဖွဲ့ ဖြစ်သော်ငြား ဆရာများ အသားကုန် train သောကြောင့် (ဆရာများ အခေါ်) သံမဏိစိတ်ဓာတ် ဆိုသည်ကို ရခဲ့သည်။ အလွန် ပျော်စရာကောင်းသော လသာ၂ ကျောင်းသူဘ၀သည် ဘယ်လိုမှ ဖျောက်ဖျက်၍ မရနိုင်သည့် အမှတ်တရလေး များစွာကို မွေးဖွားပေးခဲ့ခြင်းပါပေ.. ကျနော့် တစ်သက် လသာ၂ လောက် တွယ်တာစရာကောင်းသော ကျောင်း ဘယ်သောအခါမှ ပြန်၍မရနိုင်တော့။ ထိုကျောင်းတွင်ပဲ သူငယ်ချင်းကောင်း ဆိုသည်ထက် ညီအစ်မရင်းချာသဖွယ် ပို၍ခင်တွယ်ရသော မိန်းကလေးများနှင့် ဆုံခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းတော်ကြီးကပဲ ကျနော်တို့တွေကို ယောက်ျားဆန်သော မိန်းကလေးများ ဖြစ်အောင် သွန်သင်ပေးခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် ကျနော်၏ အထင်နှင့် အမြင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ် ဖြည့်စွက် ဖတ်ရှုပေးပါရန်။ လွန်တာရှိက ၀န္ဒာမိ ပါဗျား။ :D
Posted by ကြယ်ကြွေချိန် Labels: ကြယ်တွေကြွေတဲ့အချိန် at 7:13 PM
Hein Latt December 17, 2011 at 3:12 PM
ကြယ်ကြွေချိန် January 29, 2012 at 1:26 AM
Thank you. Hope this is an interesting topic. :)
Su Mya Win August 6, 2012 at 11:05 PM
oh , the flashbacks are coming to me by the touch yor story . Good piece of arts .
Thaw Tar Win January 31, 2013 at 4:11 PM
I love it! I love and respect my school BEHS2Latha. Thank you for posting it.
khin soe October 21, 2013 at 1:27 PM
I miss my school , Lathar2:)
Tome Tome July 26, 2017 at 1:48 AM
ကျောင်းပြန်ရောက်သွားသလိုဘဲ သူငယ်ချင်ူရေ ဘ၀အမောပြေ အလွမ်းပြေ ခံစားရလို့ကျေးဇူးပါ
Unknown September 10, 2017 at 7:26 PM
I wanna know who are u?
ကျနော့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (55)
My little black book (31)
လက်တည့်စမ်း စာတိုများ (7)
ကျနော်၏ ၀ိသေသများ (4)
ကျနော်၏ ဒဿနိကများ (3)
那些年，我们一起追的女孩 (You Are The Apply Of My Eye)
Pursuit of your happiness
The most recent wats-up-wit-ya?
Chris Rene [The X Factor 2011]
ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိအောင် ကြိုးစားဆဲ...